12 ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရုရှားခရီးသွားရုရှား > 12 ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ
ဆိုက်ဘေးရီးယား taiga ဖြတ်ပြီး, ရှေးအကျဆုံး Baikal ရေကန်, မော်စကိုသို့ရိုင်း Kamchatka, ဤ 12 ရုရှားသို့အလည်အပတ်သွားရောက်မည့်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများသည်သင်၏အသက်ရှုခြင်းကိုပျောက်ကွယ်သွားစေလိမ့်မည်. သင်၏ခရီးသွားလမ်းကိုသာရွေးချယ်ပါ, ရာသီဥတုဆိုးရွားသည့်အတွက်ပူနွေးသောလက်အိတ်သို့မဟုတ်မိုးကာအင်္ကျီကိုထုပ်ပါ, ရုရှားကိုနောက်ကိုလိုက်တယ်.
1. Altai တောင်တန်းများ
ရုရှားအကြား, မွန်ဂိုလီးယား, တရုတ်နိုင်ငံ, နှင့်ကာဇက်စတန် Altai ဒေသတွင်နေထိုင်ကြသည် 700 ရေကန်များ, သစ်တောများ, နှင့်အမြင့်ဆုံးဆိုက်ဘေးရီးယားတောင်ထိပ် Mt Belushka, တွင် 4506 မီတာ. Altai အနိုင်နိုင်လူနေထူထပ်သည်, ဒါကြောင့်သင်ကခေတ်သစ်ယဉ်ကျေးမှုအားဖြင့်နဂိုအတိုင်းတွေ့လိမ့်မည်, နှင့်သာရိုင်းရိုင်းသဘာဝနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သာသင့်ကိုနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်.
ဖြည့်စွက်ကာ, သင်တစ် ဦး စွန့်စားခရီးသွားလျှင်, ထို့နောက်မဆိုမှခရီးစဉ် 1499 Altai ရှိရေခဲမြစ်များသည်သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေလိမ့်မည်. ထို့အပြင်, အကြီးမြတ်ဆုံး Katun နှင့် Biya မြစ်များအတွက်ဖောင်တစ် ဦး မော်ကွန်းအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်ပါတယ်. သို့သော်ငြားလည်း, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် Safari တစ် ဦး ကပိုစိတ်ပြေလျော့နည်း option ကိုနိုင်ပါတယ်. ကျားသစ်ကျားသစ်နှင့်တွေ့ရန်ရှားပါးသောအခွင့်အရေးသင်ရနိုင်သည်, ibex, lynx, နှင့်ထက်ပိုမို 300 ငှက်မျိုးစိတ်. ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်, Altai သည်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နေရာ ဥရောပနှင့်ရုရှားသို့အလည်အပတ်သွားရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာဖြစ်သည်.
ကာဇန်သည်တာတာရ်စတန်သမ္မတနိုင်ငံရှိဗိသုကာကောင်းကင်ဖြစ်သည်, ရုရှားအနောက်ပိုင်း. တာတာကမ္ဘာ၏ဗဟိုမှာဗိုလ်ဂါကမ်းခြေပေါ်တွင်တည်ရှိသည်, နှင့် Kazanka မြစ်များ, ရုရှားနိုင်ငံ၏ပဉ္စမမြောက်အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်သည်.
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, Kazan ၏အဓိကဆိုဒ်များ၏ဗိသုကာသည်အဖြူနှင့်အပြာအရောင်များနှင့်ဒီဇိုင်းတို့ဖြင့်သင်၏မျက်လုံးကိုဖမ်းယူလိမ့်မည်. ဥပမာ, ကာဇန်ကရင်မလင်, ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာ, Kul Sharif ဗလီ, Epiphany ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, တာတာယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်သင်လည်ပတ်နိုင်သည့်နေရာအနည်းငယ်သာဖြစ်သည်.
3. ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ: ရေကန် Baikal
ကမ္ဘာပေါ်တွင်ရှေးအကျဆုံးသောရေကန်ဖြစ်သည်, Baikal ရေကန်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည် 25 လွန်ခဲ့သောနှစ်သန်းပေါင်းများစွာက. ၎င်း၏ရေခဲပြီးကျယ်ပြန့်သောမျက်နှာပြင်သည် Baikal ရေကန်ကိုဆိုက်ဘေးရီးယားရှိဆောင်းတွင်းဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်, နှင့်နွေရာသီ၌တည်၏, သင်သည်ဥရောပရှိအရှင်းလင်းဆုံးသောရေထဲသို့ခုန်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်တွင်အရှားပါးဆုံးသောတောရိုင်းတိရိစ္ဆာန်ကိုစူးစမ်းလေ့လာပါ.
ခရီးသွား, Baikal လမ်းကြောင်းမှခြေလှမ်းပေါ်လေးစားခြင်း, သို့မဟုတ်ရုရှားနိုင်ငံရှိအံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးရေကန်၏ကမ်းခြေပေါ်၌ကင်ကင်ဘီတစ်လုံးရှိသည်, သငျသညျစိတ်ကို - မှုတ်စွန့်စားမှုရပါလိမ့်မယ်. န်းကျင်ထင်းရှူးပင်, Taiga နှင့်တောကတစ်ဖြစ်ကြသည် ရထားခရီးစဉ် အနီးဆုံးမြို့ Irkutsk ကနေ, ရုရှားသို့သွားရောက်ရန်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နေရာ. အားလုံးကိုချွတ်ရန်, သင်သည်သင်၏ Baikal စွန့်စားမှုကိုတရုတ်သို့မဟုတ်ရုရှားမှစတင်နိုင်သည်, Trans-Siberian ရထားမှတဆင့်, နွေရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းရာသီ.
Tsars ၏မြို့နှင့်ဒဏ္endာရီနန်းတော်, စိန့်ပီတာစဘတ်သည်ကဗျာဆရာများနှင့်စာရေးဆရာများကိုလှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်. သငျသညျစိန့်ပီတာစဘတ်မှကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်အမှန်တကယ်ရုရှားကိုမမြင်ရပြီ, ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြို့ဟာရုရှားရဲ့အကျော်ကြားဆုံးနဲ့အထင်ကြီးစရာကောင်းတဲ့အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်.
Hermitage, ကက်သရင်းနန်းတော်, ဆောင်းရာသီနန်းတော်, နှင့် Peterhof ဥယျာဉ်, ရုံရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်ကြသည်. သင်ပြုလုပ်သည့်ခြေလှမ်းတိုင်းသည်ရုရှားရေးရာနတ်သမီးပုံပြင်သို့သင်နှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာစေပြီး၊. စိန့်ပီတာစဘတ်၏သမိုင်းနှင့်ဗိသုကာပညာသည်ရုရှားသို့သွားရန်နှင့်ထိပ်ဆုံးမှသွားရန်လိုအပ်သည် 12 ရုရှားမှာရှိတဲ့အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာများ.
တောရိုင်း, ကျယ်ပြန့်, လှသောအဆင်း, နှင့်အံ့သြစရာ, Kamchatka သည်ကမ္ဘာအဆုံး၌သင့်ကိုစောင့်နေသည်. Kamchatka ကျွန်းဆွယ်သည်ရုရှားအရှေ့ဖျားတွင်ရှိသည်, နီးပါးမှအိမ် 300 မီးတောင်များ, အများဆုံးတက်ကြွဖြစ်ကြသည်, နှင့်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနှင့်ရုရှားတောကန္တာရအပေါ်စိတ်စွဲမှတ်ဖွယ်အကောင်းဆုံးမြင်ကွင်းများ. အနည်းငယ်သာ Kamchatka ၏အံ့ဖွယ်အမှုများကိုသိကြသည်, ဒါကြောင့် Kamchatka ဟာရုရှားကိုသွားလည်ပတ်ရန်အတွက်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနှင့်ထူးခြားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်.
Kamchatka ၏အံ့ reach ဖွယ်ရာများကိုရောက်ရှိရန်မှာမလွယ်ကူကြောင်းသင်တွေ့လိမ့်မည်, ၎င်း၏ဝေးလံခေါင်သီတည်နေရာကြောင့်. သို့သျောလညျး, မင်းလုပ်တဲ့အခါ, သငျသညျ primal သဘောသဘာဝအားဖြင့်အံ့သြကြလိမ့်မည်, သဘာဝအံ့ဖွယ်အမှုများ: အဆိုပါ ရေပူစမ်း, မြစ်များ, တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်, နှင့်မီးတောင်၏သင်တန်း. တစ်ဦးက မီးတောင်လေ့လာရေးခရီး Kamchatka တွင်ပြုလုပ်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်ဆုံးနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဥပမာ, Klyuchevskaya Sopka သည်အမြင့်ဆုံးတောင်နှင့်တက်ကြွသောမီးတောင်ဖြစ်သည်, Kamchatka ရှိခရီးသွားများအတွက်လိုချင်သောနေရာ.
6. ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ: Sochi
ပင်လယ်နက်၏ကမ်းရိုးတန်းတွင်, အစိမ်းရောင်တောင်များနှင့်အပန်းဖြေစခန်းများကဝိုင်းရံ, Sochi သည်ရုရှားနိုင်ငံ၏နွေရာသီအားလပ်ရက်ခရီးစဉ်ဖြစ်သည်. Sochi သည်အလွန်လူကြိုက်များပြီးမြို့ကိုဆွဲဆောင်သည်4နှစ်စဉ်လူသန်းပေါင်းများစွာ, သူတို့အတွက် နွေရာသီအားလပ်ရက် ပင်လယ်နားမှာ.
နေပူအပြင်, Sochi Arboretum, သို့မဟုတ်အီတလီအနည်းငယ်သာ, ပင်လယ်နက်နှင့် Sochi ၏မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော, ဥယျာဉ်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှု။ ဥယျာဉ်များကိုနှစ်သက်ကြသည်.
ကောက်ချက်ချရန်, အပန်းဖြေအနားယူစရာနေရာမရှိတော့ဘူး, ရုရှားစတိုင်၌တည်၏, Sochi ထက်ရုရှား. ထိုကွောငျ့, သင်သည်မော်စကိုနှင့်ရုရှားနိုင်ငံများရှိမည်သည့်နေရာမှမဆိုချာသို့သွားနိုင်သည်မှာအံ့သြစရာမဟုတ်ပါ, အာရှအလယ်ပိုင်းနှင့်အရှေ့ဥရောပဒေသများမှဖြစ်သည်, ရထားနဲ့.
Veliky Novgorod သည်ငါတို့အတွက်ဂုဏ်ပြုသောနေရာတစ်ခုရှိသည် 12 ရုရှားသို့အလည်အပတ်သွားရန်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာများ. Novogrod ကြီးသည်ရုရှားနိုင်ငံဖြစ်သည့်ယနေ့ခေတ်တွင်ကြီးမားသောနိုင်ငံဖြစ်သည်ဟုသင်ပြောနိုင်သည်. နောက်ကျော 9th ရာစု, Veliky Novogrod မင်းသား Rurik ရှိခဲ့သည်, တွင် 862 ခေတ်သစ်ရုရှားနိုင်ငံကိုကြေငြာခဲ့ပြီး Novogrod ကိုကုန်သွယ်ရေးဗဟိုချက်ဖြစ်စေခဲ့သည်, ဒီမိုကရေစီ, နှင့်ရုရှားနှင့်ဘော်လကန်အကြားစာတတ်မြောက်ရေး.
ဒါကြောင့်, သင်ရုရှားသမိုင်းသို့ရောက်လျှင်, Veliky Novogrod သည်သင်၏ရေပုံးစာရင်းတွင်ပါဝင်သင့်သည်. Novogrod ကရင်မလင်ခံတပ်, ဘုရားရှိခိုးကျောင်း St. ဆိုဖီယားပဲ2သင့်ကိုအံ့အားသင့်စေမည့် Veliky Novogrod ရှိမဖြစ်မနေတွေ့မြင်ရမည့်ဆိုဒ်များ. ရပ်တည်နေသည် 800 နှစ်ပေါင်း, ဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့သောအဖြစ်အပျက်များနှင့်အဖြစ်အပျက်များကိုသာစဉ်းစားပါ.
8. ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ: Olkhon ကျွန်း
Baikal ရေကန်သည်အလွန်ကြီးမားသည်, ရုရှားကိုသွားလည်ရင်နောက်ထပ်အံ့သြစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုထပ်ထည့်ရမယ်. Olkhon ကျွန်းသည် Baikal ရေကန်တွင်အကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်သည်, နယူးယောက်စီးတီးနှင့်အရွယ်အစားဆင်တူသည်. ကျွန်းသည်သစ်တောများကိုစဉ်းစားရန်နေရာဖြစ်သည်, ကျောက်ရှုခင်း, သာ 150000 ဒေသခံများက, နယူးယောက်စီးတီးနှင့်မတူပဲ.
သို့သျောလညျး, Olkhon ကျွန်းသည် Baikal ရေကန်သို့ခရီးသွားများအတွက်ရေပန်းစားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဆိုလိုသည်မှာနွေရာသီတွင်သင်သည်ကြည်လင်သောနိမ့်သောရေအိုင်၌ရေကူးပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိအနက်ဆုံးရေကန်ထဲသို့ရေငုပ်နိုင်သည်။. ဆောင်းတွင်းမှာ, သို့သော်ငြားလည်း, ကမ္ဘာပေါ်တွင်သက်တမ်းအရင့်ဆုံးသောရေကန်ကြီးကိုသင်လေးစားကြည်ညိုနိုင်သည်, ၎င်း၏ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဝတ်စုံ၌တည်၏, အေးခဲပြီးအဖြူရောင်တွင်လှပသည်.
ကျွန်းသည် Sakhuyurta နှင့်ကူးတို့ဝေးသော Buryat လူမျိုးများနှင့်ကူးတို့ဖြစ်သည် 1 Shamanic စွမ်းအင်ငါးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတိုင်များ. တကယ်တော့, သငျသညျကျွန်း၏အလယ်ဗဟိုတွင် shaman ကျောက်တုံးများကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်.
သင်သည်သင်၏ Trans-Siberian ခရီးစဉ်မှာ, ထို့နောက်သင်သည် Irkutsk တွင်ရပ်နားမည်, အရှေ့ဆိုက်ဘေးရီးယား၏တရားမဝင်မြို့တော်. 19th ရာစုရုရှားအသင်းတော်များ, သစ်သားအညိုရောင်နှင့်အပြာရောင်စုံအိမ်များ, ဆိုက်ဘေးရီးယား Taiga, Irkutsk သည်လှပသောသမိုင်းဝင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်.
ထို့အပြင်, Irkutsk သည်တစ်ချိန်ကဆိုက်ဘေးရီးယားရှိရုရှားမှူးမတ်များနှင့်ပညာတတ်များပြည်နှင်ခံနေရာဖြစ်သည်, အကယ်၍ အာဏာရလာလျှင်အစိုးရကသူတို့အာဏာကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည်. ဒါကြောင့်, Irkutsk နှင့် Siberian taiga တို့တွင်ရုရှားကဗျာနှင့်စာပေများစွာပါရှိသည်. မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီနေ့ Irkutsk ဟာလှပတဲ့မြို့တစ်မြို့ပါ: ပိတ်ပင်တားဆီးမှု 13 18 ရာစုသစ်သားအိမ်များ, ကယ်တင်ရှင်ရဲ့ဘုရားကျောင်း, နှင့် Bronshteyn ပြခန်းသည်သင်လည်ပတ်သင့်သောနေရာအနည်းငယ်ဖြစ်သည်.
10. ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ: Stolby သဘာဝဘေးမဲ့တော
Yenisei မြစ်ကမ်းနားမှာ, Stolby သဘာဝအရံသည် Krasnoyarsk မြို့၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိသည်. အဆိုပါအရံထံမှအလှတရားအတွက်မကျပါဘူး ထိပ်တန်း5ဥရောပရှိအလှဆုံးသဘာဝသယံဇာတများ. ရုရှားနိုင်ငံတစ်လွှား Trans-Siberian ရထားပေါ်တွင်ခရီးရှည်ပြီးနောက်, သငျသညျအရံပတ်ပတ်လည်လှည့်လည်သင့်ရဲ့ဝိညာဉ်သည်အိပ်ချင်ခန္ဓာကိုယ်နှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုနှိုးမြှင့်တက်လာကြောင်းတွေ့လိမ့်မည်.
Stolby ရှိပါတယ်5အဓိကအရောင် - coded လမ်းကြောင်း, ဒါကြောင့်သင်အများကြီးသေးငယ်တဲ့သစ်တောလမ်းကြောင်းအတွက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသွားပါလိမ့်မယ်. ပြီးတာနဲ့သင်ကနက်ရှိုင်းသောတော၌ရောက်ရှိ, သငျသညျအရံရဲ့နာမတျောမူရင်းရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်. ရှိပါတယ် 100 stolby - ကျောက်ကျောက်တိုင်, impressive and tall clusters of stolby amidst the trees.
ဤလှပသောသဘာဝပန်းခြံသို့လာရောက်လည်ပတ်ခြင်းသည်မိခင်သဘာဝ၏အကောင်းဆုံးကိုခံစားရန်ဖြစ်သည်. ရုရှားသစ်တောများ၏အနံ့နှင့်အမြင်များကဲ့သို့ဘာမှမရှိပါ, နွေရာသီသို့မဟုတ်ဆောင်းတွင်း၌တည်၏. သို့သျောလညျး, အကယ်၍ သင်သည်ဆောင်းရာသီခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်နေလျှင်အလွှာပေါင်းများစွာကို ၀ တ်ဆင်ရန်လျင်မြန်သည့်သတိပေးချက်တစ်ခုရရှိသည်, ဆိုက်ဘေးရီးယားအလွန်အအေးနှင့်ဆီးနှင်းရရှိသွားတဲ့အဖြစ်.
ရောင်စုံ Arbat, ကရင်မလင်နှင့် Red Square, စိန့်. Basil ရဲ့ဘုရားရှိခိုးကျောင်း, နှင့် Moskva မြစ်, တိုင်းပို့စကတ်အတွက် feature, ပုံ, နှင့်မော်စကိုအကြောင်းကိုအပိုင်းအစ. သို့သျောလညျး, ဒီအံ့ sites စရာကောင်းတဲ့ဆိုဒ်များကိုသင်ခြေမချနိုင်ခင်အထိ, သူတို့ရဲ့ကြီးမြတ်မှုနဲ့လှပမှုကိုခင်ဗျားတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်. မော်စကို၏လှပသောကျက်သရေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းထုတ်စရာမရှိပါ. ဒါကြောင့်, ကမြို့တော်တစ်ခုဖြစ်သည်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး 12 ရုရှားသို့အလည်အပတ်သွားရန်အံ့သြဖွယ်အကောင်းဆုံးနေရာများ.
မော်စကိုသည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်, မြေအောက်မီထရိုဘူတာများ၏မြေအောက်မြို့ကဲ့သို့အညီအမျှခမ်းနားဖြစ်ပါတယ်. မြို့တစ်မြို့ မော်စကိုရဲ့မြေအောက်ခရီးသွားလာ မော်စကိုမှာလုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်သည်. ဒီမှာ, သငျသညျအနုပညာနှင့်ပတ်သက်။ အချက်အလက်တန်ချိန်ရပါလိမ့်မယ်, ပုံစံ, တိုင်းဘူတာရုံ၏သမိုင်း, အဖြစ်မြို့, ဒေသခံတွေကနေ.
12. ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ: ကီဇီကျွန်း
သစ်သားအသင်းတော်များ, လုံးဝသစ်သားတစ်ခုရှစ်ထောင့်တိုင်းနာရီမျှော်စင်, ထူးခြားတဲ့ Kizhi Pogost ဖွဲ့စည်း. ဒီထူးခြားတဲ့သစ်သားအဆောက်အအုံတွေကိုလက်သမားတွေလုပ်တယ်, အိုနီးဂေးရေကန်ရှိကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်တွင်တည်ရှိသည်. ဤပုံစံသည်ရှေးခေတ်ကလူကြိုက်များခဲ့သည်ကိုသိရှိရ။ သင်အံ့အားသင့်လိမ့်မည်. ဤသစ်သားနေရာများသည် ၁၆ ရာစုအတွင်းစီရင်စုနယ်နေရာများဖြစ်သည်, နှင့်ဖြစ်ကောင်းအစောပိုင်းက.
ချာ့ချ်များသည်ရုရှား၌ရှားရှားပါးပါးမြင်ကွင်းမဟုတ်သော်လည်း, သစ်သားဘုရားကျောင်းဖြစ်ကြသည်. ကီဇီကျွန်းသည်ရုရှားလက်မှုပညာ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်. ကီဇီကျွန်းသည် ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့အမွေကို ခံရ. site ကို, နှင့်ကမ္ဘာ့အံ့ဘွယ်သောအမှုတစ်ခု, တစ်ခုလုံးကိုရှုပ်ထွေးသောအဖြစ်, သဘာဝရှုခင်းအတွက်ခမ်းနားစွာကိုက်ညီ.
ဤတွင်မှာ တစ်ဦးကရထား Save, မမေ့နိုင်သောခရီးစဉ်တစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကူညီပေးပါမည် 12 ရထားနဲ့ရုရှားမှာရှိတဲ့အံ့သြဖွယ်သောနေရာများ.
ငါတို့ blog post ကို embed လုပ်ချင်ပါသလား“ 12 သင်၏ site ပေါ်သို့ရုရှားသို့လာရောက်လည်ပတ်ရန်အံ့သြဖွယ်ရာနေရာများ”? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmy%2Famazing-places-visit-russia%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
#ရုရှား AmazingRussia ဘုရား LakeBaikalrussia မော်စကို Mostbeautifulplacesinrussia SaintPetersburg Siberia TranSiberiantrain TravelRussia VisitRussia